Jürgen Klopp ayaa ka hadlay taam ahaan shaha Roberto Firmino iyo Virgil Van Dijk ka dib guushii %
Jürgen Klopp ayaa ka hadlay taam ahaan shaha Roberto Firmino iyo Virgil Van Dijk ka dib guushii
By Ramzi Yare	 Last updated Apr 27, 2019
Weeraryahankan xulka Brazil ayaan qeyb ka aheyn kulankii kooxdisa Reds 5-0 ee kaga adkatay kooxda Huddersfield ee ka dhacay garoonka Anfield habeenkii xalay ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray muruqa intii lagu jiray tababarka Melwood.
Klopp ayaa rajeynaya in Firmino uu ka soo kabsan karo dhaawaca yar ee uu kusegay kulanki Huddersfield Town waxa uu rajo boqolkibo boqol ah ka mujiyay in kulanka, Arbacada lugta hore ee semi-finalka Champions League oo ay la leeyihiin Barcelona oo ku ciyaareysa Camp Nou, waxa uu xaqiijiyay xilli hore inuu yahay dhawaca mid yar oo an seejin karin kulanka Arbacada.
Waxa uu sharaxay suxufiyiinta shirkiisa jaraa’id ee ciyaarta ka dib: Firmino shalay ayuu tababar ahaan u tababaray, ma aheyn mid xoogan, kaliya waxaan u baahneyn inaan ka shaqeyno qeyb yar oo halkan ah, halkaan iyo dhowr waxyaaloodba.
Anigu ma aanan arkin tababarki kulanki xalay kahor, dhacdadii ugu dambeysay ee tababarka waxaana dareemay murug xoogaa yar, Lakiin asiga aya ishegay in uu rabo kaliya in uu nasto kulankan si uu nasiino uqaato anigane wan uu ogaladay.
“Hadda, ogaanshaha rasmiga ah ee sida rasmiga ah wuxuu leeyahay [ isaga ] Firmino dhawac yar oo muruqa oo kaliya aan nasinay kulanki xalay, marka laga reebo ereyga ‘jeexasho’ oo aad idinka ku darsaten wax walba waa wax fiican lkn ma ahan mida idinka kadhigten.
waxan ahay qof adinka idinkaga aqoon badan isaga sidaasi darteed waxa uu diyaar u noqon karaa Arbacada, laakiin waxa dhici doono ma hubno haatan xilligan. Sababtoo ah isaga hada wa diyaar kulanka Arbacada, waa ay u badan tahay inuu so noqon doono
Sidaasi darteed, dhamaan wararka xun ee aad ku heli kartaan sida bilaashka ah waa wax idinka idin qaas ah, lakiin anaga waxa jira ayaa ah in uu jirin waqtigan dhawac Firmino ah oo kuseegi karo Arbacada.
Dhinaca kale, Klopp ayaa xaqiijiyay inuusan jirin wax welwel ah oo ku aadan taam ahaanshaha Virgil Van Dijk.
Daafaca dhexe ayaa u muuqday inuu dhaawac soo gaaray qeybtii labaad ee kulankii Huddersfield, laakiin wuxuu dhameystay 90 daqiiqo.
Waxan weydiyay Van Dijk in uu dhaawac soo gaaray, Klopp ayaa ku jawaabay: “Maya, waxba. Waan weydiiyay isagu sida aad aniga hada iweydineso oo kale wuxuu igu yiri, maya, maya, wax walba waa aay wanaagsanyihin waxna ma qabi.
8-Xiddig oo laga yaabo in ay boorsooyinkooda ka qaataan kooxda Man United
Hordhaca:Man United Vs Chelsea- Red Devils oo Doonaysa usoo bixida champions League